ဥရောပမှကမ်းလှမ်းထားအကောင်းဆုံးဒိန်ခဲဆိုတာဘာလဲ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှကမ်းလှမ်းထားအကောင်းဆုံးဒိန်ခဲဆိုတာဘာလဲ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24/04/2020)
ဒါဟာဥရောပကအကောင်းဆုံးသောအလွန်နာမည်ကြီးတကယ်တော့င် ခရီးလမ်းဆုံး အရည်အသွေးအဒိန်ခဲများအတွက်. ထိုအခါဒိန်ခဲကိုနှစ်သက်အဖြစ်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းဥရောပပူဇော်ရန်နှင့်တွေ့ဖို့ဘယ်လိုရှိတယ်ကိုအကောင်းဆုံးဒိန်ခဲဖြစ်သည့်သိလို.
ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးဂုဏျဒိန်ခဲများ၏စာရင်းမှတဆင့် run အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို join. ကျနော်တို့တိကျတဲ့ဒိန်ခဲအဘို့အကျော်ကြားနေသောအရပ်တို့ကိုထုတ်ဖေါ်. ငါတို့သည်လည်းအဆင်ပြေခြင်းနှင့်စတိုင်တွင်ဤခရီးစဉ်ကိုရောက်ရှိဖို့ဘယ်လိုဆွေးနွေးရန် ရထားနဲ့ သင့်ရဲ့ဥရောပဒိန်ခဲအောင် ခရီးသွားခြင်း တဦးတည်းကိုသင်ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်.
ဆွစ်ဇာလန်ကျော်ဖို့နေရာဖြစ်သည် 450 အကောင်းဆုံးကိုဒိန်ခဲဥရောပအကြားနေသောဒိန်ခဲ၏အမျိုးပေါင်း. င်း ကြွယ်ဝသောသမိုင်း ဒိန်ခဲထဲမှာကတည်းကအဘယ်သူမျှမဖွင့်အံ့အားသင့်စရာမှကြွလာ ဆွစ်ဇာလန် ဒါဟာသူတို့ရဲ့နို့မှကြွလာသောအခါတစ်ဦးအညီအမျှအထင်ကြီးဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်. ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့အံ့မခန်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည် တောင်ပေါ်, ကျွဲနွားလတ်ဆတ်တဲ့အပေါ်ကျက်စား, စင်ကြယ်သောမြက်. မြက်-ကျွေးမွေးနွား ပို. ပင်အရသာဒိန်ခဲစေသည်သောအကောင်းဆုံးနို့ထုတ်လုပ်ရန်.
အရသာပျော့ Emmental ဖြစ်ကောင်းအကျော်ကြားဆုံးဆွစ်ဇာလန်ဒိန်ခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်. သင်ကမှာမူရင်း Emmental ထုတ်လုပ်သူများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် Emmentaler ဒိန်ခဲစက်ရုံ Schaukaeserei. သငျသညျ Gruyere စေကြည်နူးဖွယ်ဒိန်ခဲစက်ရုံများကိုတွေ့လိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်, နှမျးဖတျကြောကျ, အစိမ်းရောင်ဒိန်ခဲ, ဆိတ်နို့ Ricotta, Bregaglia, နှင့် Buffalo Mozzarella.
သငျသညျတော်တော်များများထိုကဲ့သို့သောဂျီနီဗာအဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ကြီးမားတဲ့မွို့တစုံတမွို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောဆွစ်ဇာလန်ဒိန်ခဲရနိုင်, ဇူးရစ်, သို့မဟုတ်ဘေဆယ်. သင်တို့သည်ဤရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထားလှပသောမြို့ကြီးများ တူသောအခြားအဓိကဥရောပမြို့မြို့တို့မှ ပဲရစ်, ဘာလင်, သို့မဟုတ် ရောမမြို့. နာမည်ကြီးသောဤဒဏ်ငွေဒိန်ခဲ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်လူသိများသေးငယ်တဲ့ရွာတွေကိုလာ, သငျသညျနှစျခုရထားယူနိုင်ပါသည်, အဓိကမြို့တနှင့်အခြားမြို့များသို့ရောက်ရန်.
သငျသညျဥရောပပြင်သစ်ဒိန်ခဲစဉ်းစားအလိုအလျောက်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးဒိန်ခဲကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ, အဆိုပါ creamy တွေဖြစ်တဲ့နှင့်ဒဏ်ငွေ Camembert စိတ်ထဲထံသို့လာသခြော. သို့သျောလညျး, ပြင်သစ်ကိုလည်း၎င်း၏ကြွယ်ဝသော Roquefort များအတွက်လူသိများသည်, ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးရှေးခေတ်ဒိန်ခဲတစ်ဦး. ဤသည်ဒိန်ခဲတစ်ခုဝယ်ယူအရသာနှင့်အတူသူတို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်.
ပြင်သစ်ကိုလည်း Boursin မှနေရာဖြစ်သည်, ကဟင်းလျာများသို့လှလှပပထည့်သွင်းအဖြစ်အများအပြားစားဖိုမှူးချစ်မြတ်နိုးသော creamy ဒိန်ခဲ. Chèvreအခြားနာမည်ကြီးပြင်သစ်ဒိန်ခဲဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဒိန်ခဲ၏အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်တဲ့ texture နဲ့ဆိတ်နို့ဒိန်ခဲင်; အဟောင်းက, ပို acrid နှင့်ကြွယ်ဝသော၎င်း၏ကိုက်ညီမှု. Tomme က de Savoy အခိုငျအမာနွားမရဲ့နို့တစ် buttery ရောင်စုံ-အတွင်းပိုင်းနှင့်အတူဒိန်ခဲနှင့်အညိုရောင်ကြိတ်ဖြစ်ပါသည်.
သင်အကြိုက်ဆုံးပြင်သစ်မြို့ကြီးများသို့သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်ဤအ flavourful ပြင်သစ်ဒိန်ခဲရှာဖွေတွေ့ရှိ. ပဲရစ်မှရထားစီးပါ, လိုင်ယွန်, Marseille, နှင့် အခြားမြို့များ အဓိကဥရောပမြို့ကြီးများအများစုထံမှပြင်သစ်တွင်. တစ်ဦးဒိန်ခဲကိုနှစ်သက်အဖြစ်, သငျသညျကိုပင်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုပေမည် ဒေသခံတွေဟာဒိန်ခဲစေရှိရာလယ်ယာအိမ်. သငျသညျရထားအားဖြင့်အဓိကမြို့ကြီးများရောက်နေပြီတစ်ချိန်ကဤရွေ့ကားသင့်ရဲ့ခရီးဆက်လက်အားဖြင့်အလွယ်တကူလက်လှမ်းမှီကြသည်.
အကောင်းဆုံးချိစ်ဥရောပ – အီတလီ
ဥရောပအကောင်းဆုံးဒိန်ခဲမှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ် အီတလီ, ကမ်ဘာပျေါမှာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒိန်ခဲထုတ်လုပ်သူများထဲမှ. ကမ်ဘာပျေါမှာအကျော်ကြားဆုံးဒိန်ခဲ၏အချို့အီတလီများမှာ. အဘယ်သူသည် Mozzarella ကြား၏မရှိသေးပေ, Parmigiano-Reggiano, နှင့် Ricotta? အီတလီနိုင်ငံကနေမိုဃ်းသီးအခြားကမ္ဘာကျော်ဒိန်ခဲ Gorgonzola များမှာ, Mascarpone, Provolone, နှင့် Pecorino. ဤရွေ့ကားပြည်တွင်းဖြစ်ထုတ်လုပ်ဒိန်ခဲအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရိုးရာချက်ပြုတ်နည်းများကိုသုံးပါ.
အီတလီကသူတို့ဒိန်ခဲကိုချစ် သူတို့အကောင်းဆုံးဒိန်ခဲဥရောပပွဲတော်များသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြီဤမျှလောက်. အကြီးဆုံးဒိန်ခဲပွဲတော်များတစ်ခုမှာ Piedmont အတွက် bra ဒိန်ခဲပွဲတော်ဖြစ်ပါသည်. စစ္စလီကျွန်း "အခမ်းအနားကျင်းပRicotta ချိစ်ပွဲတော်” ဒါမှမဟုတ် Ricotta နှင့်ဒိန်ခဲ ပွဲတော် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း. စက်တင်ဘာလအတွင်းပထမဆုံးတနင်္ဂနွေ Tuscany မှဦးခေါင်းနှင့်ဒေသခံတွေအတူ Pecorino ဒိန်ခဲပွဲတော်ကျင်းပ.
ရောမမြို့မှရထားစီးပါ, Florence, မီလန်, Naples, နှင့်အခြားအဓိကမြို့ကြီးများဖြောင့်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးဒိန်ခဲဥရောပအမြည်းမှ, တစ်ဦးကရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-cheese-europe/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ဒိန်ခဲ #Cheeze အစာ ခရီးသွား travelfrance travelitaly travelswitzerland